Gcina i-Huawei P10 manje bese uthola iHuawei Watch 2 njengesipho | Izindaba zamagajethi
Lokhu kungenye yalezi zikhuselo ongeke uziphuthe uma ungomunye walabo abacabanga ukuthenga imodeli entsha yomkhiqizo waseChina iHuawei owethulwe izolo ntambama kwi-Mobile World Congress eBarcelona. Kulo nyaka, njengakwezinye izikhathi ezedlule, basenzela ukukhushulwa kwamadivayisi abo ukuze sethule ukuthengwa futhi kulokhu kungukwenyusa okuthakazelisa ngempela kusukela ku-rukwenza ukuthengwa kwangaphambilini kweHuawei P10 entsha, basinika iHuawei Smartwatch 2 BT entsha.
Lokhu kungukunikezwa kwazo zonke izitolo ezinkulu lapho ukubhuka sekungenziwa khona (lapho sekukhokhelwe) nakuwo wonke amazwe lapho kuthengiswa khona iHuawei P10 entsha, ngakho-ke inkampani izibophezele ngokuqinile kulesi siginali esisha nabasebenzisi abafuna ukuthenga i-terminal entsha ube nesipho esihle, kulokhu kunenani elingaphezu kwama-euro angama-200. IHuawei ihlala ivame ukukhuphula amaphromoshini lapho yethulwa futhi siyakhumbula ukuthi ngonyaka owedlule ngeHuwaei P9 benza le phromoshini efanayo, esingakhumbuli ukuthi bekuyikho ngesikhathi sokuqaliswa noma ngemuva kwaso.
Kulawa madivayisi amasha unezindatshana ezimbalwa ku-Actualidad Gadget nayo yonke imininingwane, kulesi sixhumanisi esifanayo mayelana ne- Huawei P10 nakulesi mayelana namawashi amasha I-Huawei Watch 2. Ungaphuthelwa yithuba uma uhlela ukuthenga imodeli entsha yezinkanyezi zeHuawei, ngoba isipho sisifanele ngempela futhi abakaqinisekisi ngokusemthethweni ukuthi lokhu kuthuthukiswa kuzotholakala nini, kepha into ephephe kunazo zonke ephela uma sekuthengisiwe ezitolo ngokusemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Gcina i-Huawei P10 manje bese uthola i-Huawei Watch 2 njengesipho
IMoto G5 entsha ne-G5 Plus nazo zethulwe eMWC
INokia 3, Nokia 5 neNokia 6 noma yini efanayo, ukuvuswa kwenkampani eyinganekwane